Xog: Al-Shabaab oo weeraro u qorsheysay MUQDISHO + Goobaha la beegsan karo | Dalkaan.com
Home Warkii Xog: Al-Shabaab oo weeraro u qorsheysay MUQDISHO + Goobaha la beegsan karo
Xog: Al-Shabaab oo weeraro u qorsheysay MUQDISHO + Goobaha la beegsan karo
Muqdisho (dalkaan) – Hay’adaha amniga Soomaaliya ayaa ka digay weeraro xooggan iyo qaraxyo ay kooxda Al-Shabaab qorsheyneyso inay ka fuliso Muqdisho, sida ku cad qoraalka digniinta oo ay aragtay dalkaan.
Digniinta oo loo diray ilaalada madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegau in Al-Shabaab ay qorshaynayso in gaari noociisu yahay Fiat 110 xamuul ah oo ay ka soo buuxisay walxaha qarxa ku weerarto xarumo ka mid ah kuwa dowladda.
Goobaha la xusay, ee ay suurta-galka tahay in Al-Shabaab ay beegsato, ayaa waxaa ka mid ah xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga, xarunta Taliska Ciidanka Xoogga iyo Xerada Damaanyo oo ay degan yihiin Ciidanka Gorgor.
Digniinta ay aragtay dalkaan ayaa sidoo kale lagu sheegay in
Al-Shabaab ay doonayaan in gaadiid ay ka soo buuxiyeen walxaha qarxa ay ku weeraraan bartilmaameedyada ay ka mid yihiin; hoteellada ku yaalla Xeebta Liido, koontaroolada laga ilaaliyo madaxtooyada qaranka, iyo xarunta taliska booliska ee qeybta guud ee gobolka Banaadir.
Al-Shabaab ayaa la sheegay inay adeegsan karaa baabuur ay ka mid yihiin Runeed kalarkeedu yahay buluug, Layla kalarkeedu yahay cagaar, iyo Dayno kalarkeedu yahay caddaan.
Inkasta oo digniinta lagu sheegay in weeraradan loo adeegsan karo baabuur, haddana waxaa sidoo kale suurta-gal ah in Al-Shabaab ay weerarada u adeegsato shaqsiyaad soo xirta jaakadaha qaraxyada.
Bilihii tegay Al-Shabaab ayaa inta badan qaraxyadeeda u weecisay shaqsiyaadka xirta jaakadaha qarxa ee is-miidaamiya, kadib markii ay hay’adaha ammaanka inta badan ka hortageen baabuurta laga buuxiyo walxaha qarxa.
Previous articleWararkii ugu dambeeyey ee weerar dhowr jiho looga hayo Tigray-ga oo sii xoogeystay
Next articleDhaq-dhaqaaqyo culus oo ka billowday duleedka Guriceel – Maxaa soo kordhay?
Sheekh Shaakir oo ‘loo qabtay inuu saacado gudahood uga baxo’ GURICEEL
Waa sidee saaka xaaladda magaalada Guriceel?
War Rasmi Ah: Uefa oo ku Dhawaaqday Afarta Xidig ee ku...
dalkaan_2ujpzr - October 21, 2021 0
Xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa ku dhawaaqay liiska xiddigaha ku tartami doona ciyaaryahankii ugu fiicnaa UEFA Champions League toddobaadkan xilli xalay...
“Waa ciyaaryahanka ugu fiican horyaalka haatan” – Rio Ferdinand oo Magacaabay...
Hordhac: Spain Vs France ee Tartanka UEFA Nations League, Wararka Labada...
Ciidamada ammaanka iyo rag hubeysan oo ku dagaalamay Bakaaraha
Wakiilka Andrea Pirlo oo ka hadlay Wararka Xanta Suuqa ee ku...
Maxaa looga baahnaa dadka reer LAASCAANOOD, kadib tallaabadii SOMALILAND?
Afar arrin oo xuddun u ah xiisadda labada dal ee Muslim-ka...
Jurgen Klopp oo xaqiijiyay in Alisson & Fabinho ay seegi doonaan...
Sababta loo qaban la’yahay shirkii FARMAAJO iclaamiyey ee lagu soo bandhigi...
dalkaan_2ujpzr - October 9, 2021 0